China Da Yun ရိုးရာ တရုတ်ဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းများ Herba Cistanches ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စက်ရုံ |အကောင်းဆုံး
Da Yun ရိုးရာတရုတ်ဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းများ Herba Cistanches
အင်္ဂလိပ်အမည်- herba cistanches
လက်တင်အမည်- Cistanche salsa(CAMey.)G.Bec
အပိုင်း- Roots ကိုအသုံးပြုပါ။
ကျောက်ကပ်ကို အားကောင်းစေပြီး အနှစ်သာရနှင့် သွေးကို အကျိုးပြုပြီး ဝမ်းကို ပြေလျော့စေပါသည်။
သိပ္ပံအမည် Cistanche deserticola ဟုခေါ်သော Dayun ကို တရုတ်ဆေးပညာရှင်များက မှင်စာ သို့မဟုတ် ရွှေမျှစ်ဟုခေါ်သည်။၎င်းသည် အလွန်အဖိုးတန်သော တရုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များဖြစ်ပြီး "ကန္တာရဂျင်ဆင်း" ဟုခေါ်သည်။ရှင်ကျန်းနှင့် အတွင်းမွန်ဂိုလီးယားတို့တွင် အဓိကအားဖြင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသည့် အနောက်နိုင်ငံများ၏ သမိုင်းတွင် ရတနာတန်ဆောင်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသည်။
Cistanche deserticola သည် မြေဆီလွှာနှင့် ရေတွင် လိုအပ်ချက်နည်းပါးသော Haloxylon ammodendron ၏ အမြစ်ပေါ်ရှိ ကပ်ပါးအပင် ကပ်ပါးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၊ Hebei ပြည်နယ်၊ Cangzhou ရှိ သဲမြစ်ကမ်းခြေတွင် တောရိုင်းပင်များကို အတုယူကာ Cistanche deserticola စိုက်ပျိုးခြင်းတွင် အောင်မြင်မှုတစ်ခု ရရှိခဲ့သည်။Cistanche deserticola ၏အရည်အသွေးသည် သဲကန္တာရဧရိယာထက် မြေဆီလွှာအရည်အသွေးထက် များစွာသာလွန်ကောင်းမွန်သောကြောင့် ထုတ်လုပ်မှုသည် အလွန်မြင့်မားသည်။Gansu၊ Qinghai၊ Xinjiang၊ Inner Mongolia၊ Russia၊ Mongolia နှင့် Iran။
ကျောက်ကပ်ကို သန်မာစေပြီး အနှစ်သာရနဲ့ သွေးကို အကျိုးပြုပြီး ဝမ်းကို ပြေလျော့စေပါတယ်။လျှောက်လွှာ: ဆေးဝါး၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအစားအစာ၊ ဝိုင်၊ စသည်တို့။
ဓမ္မတာမမှန်ခြင်း၊ သွေးမတိတ်ခြင်း၊ မျိုးမအောင်ခြင်း၊ ပန်းသေခြင်း၊ သုတ်ပိုးဝင်ခြင်း၊ ဆီးကျဲခြင်း၊ အသံဗလံဖြစ်ခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ အအေးမိခြင်းနှင့် အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖျားနာခြင်းတို့ကြောင့် ဝမ်းပျက်ခြင်း။
1. Angelica sinensis သည် သွေးကို အာဟာရဖြည့်ပေးပြီး ခြောက်သွေ့မှုကို သက်သာစေရန်၊ ရေကိုတိုးစေပြီး လှေပေါ်တက်ကာ ဝမ်းနုတ်ဆေးပါ အားကောင်းစေရန်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။yang အားနည်းပြီး အနှစ်သာရနှင့် သွေးမလုံလောက်သော သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။2၊ Morinda officinalis ဖြင့် ကျောက်ကပ်ကို ပူနွေးစေပြီး ယန်းကို အားကောင်းစေကာ စိုစွတ်ခြောက်သွေ့မှုအတွက် သင့်လျော်ပြီး ခြောက်သွေ့သောရေမလိုအပ်ဘဲ မီးအားပြန်လည်ဖြည့်တင်းခြင်း၏ အံ့သြဖွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ကျောက်ကပ် yang ချို့တဲ့ခြင်း၊ မသန်စွမ်းခြင်းနှင့် သုက်ပိုးမွှားများ ဖျားနာခြင်း၊ အေးသောခါးနှင့် ဒူးခေါင်း၊ အရိုးနှင့် ကြွက်သားများ အားနည်းခြင်း စသည်တို့အတွက်၊ ၎င်းကို မကြာခဏ ရွေးချယ်လေ့ရှိသည်။ယန်ကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး ဝမ်းကို ပြေလျော့စေသည့် လုပ်ဆောင်ချက်လည်း ပါရှိသည်။yang ချို့တဲ့ခြင်းကြောင့် ဝမ်းချုပ်ခြင်း နှင့် ဝမ်းချုပ်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုသောအခါ Cistanche deserticola ၏ ပမာဏကို သင့်လျော်စွာ တိုးမြှင့်နိုင်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကုသရေး အာနိသင်ကို ရရှိနိုင်သည်။3. Astragalus membranaceus နှင့် ပေါင်းစပ်သောအခါ Cistanche deserticola သည် Astragalus membranaceus ၏ qi-invigorating power ကို ကျောက်ကပ်ဆီသို့ သယ်ဆောင်နိုင်ပြီး ကျောက်ကပ်နှင့် qi တို့ကို သန်မာစေကာ ကျောက်ကပ် yang ကို ကူညီပေးသည့် အာနိသင်ရှိသည်။4၊ Achyranthes bidentata နှင့်အတူ၊ သီးသန့်ကုသိုလ်နှစ်ခုရှိသည်။ပထမဦးစွာ၊ ၎င်းတို့သည် အချင်းချင်း အားဖြည့်ပေးပြီး ကျောက်ကပ်ကို ပူနွေးစေပြီး ယန်အား အားကောင်းစေရန် တွဲပေးရပါမည်။ဒုတိယအနေနဲ့၊ Achyranthes bidentata ဟာ လမ်းလျှောက်လို့ကောင်းတဲ့အခါ ဆေးကို နှိမ့်ချနိုင်ပါတယ်။5. သိုးသားသည် ယင်ကို အားကောင်းစေပြီး အနှစ်သာရကို အကျိုးပြုနိုင်သည်။ဆေးဝါးနှစ်မျိုး၊ ယန်တစ်မျိုးနှင့် ယင်တစ်မျိုးသည် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ကန့်သတ်ထားကာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မြှင့်တင်ကာ အချင်းချင်း အားဖြည့်ပေးကာ ကျောက်ကပ်၏ yin နှင့် yang ကို ဟန်ချက်ညီအောင် လုပ်ဆောင်ပေးသည်။
Dayun သည် မတူညီသော ကောက်ချိန်အချိန်အလိုက် နွေဦးနေ့နှင့် ဆောင်းဦးနေ့ကို ပိုင်းခြားထားသည်။နွေဦးရာသီသည် နှစ်စဉ် ဧပြီလတွင် စတင်တူးပြီး၊ ပူပြင်းသော နွေရာသီနေရောင်တွင် လှည့်ပတ်ကာ အခြောက်ခံပြီးနောက် အသားနှင့် ပင်စည်များကို ထုပ်ပိုးသယ်ပို့သည်။ဆောင်းဦးတွင် ပေါက်ရောက်သော Dayun ၏ တူးဖော်မှုကာလသည် စက်တင်ဘာလမှ အောက်တိုဘာလအထိဖြစ်သည်။၎င်း၏တစ်ဦးချင်းစီအရွယ်အစားသည် နွေဦးတွင် Dayun ထက်အနည်းငယ်သေးငယ်ပြီး ၎င်း၏အစိုဓာတ်ပါဝင်မှုသည် နွေဦးတွင် Dayun နှင့်တူသည်။သို့သော်လည်း ဆောင်းဦးနှောင်းပိုင်းနှင့် ဆောင်းဦးအစောပိုင်းတွင် နေရောင်ခြည်အားနည်းမှု၊ အပူချိန်နိမ့်ကျမှုနှင့် တိုတောင်းသောနေရောင်ခြည်ကြောင့် အရည်အသွေးနှင့် သတ်မှတ်ချက်များကို အာမခံရန် ခက်ခဲသည်။
(၁) အခြောက်ခံခြင်း။နေ့ဘက်တွင် သဲထဲတွင် ဖြန့်ကျက်၍ နေ့နှင့်ည အပူချိန် ကွာခြားမှုကြောင့် အေးခဲခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် အစုအပုံများကို စုဆောင်းကာ ညဘက်တွင် ဖုံးအုပ်ထားပါ။Cistanche deserticola သည် နေအခြောက်ခံပြီးနောက် အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး အရည်အသွေးမြင့်မားသည်။
(၂) ဆားရည်ပြုလုပ်ခြင်း။Cistanche deserticola ကို ဆားတွင် 1 ~3နှစ်ကြာ နှပ်ထားပါ သို့မဟုတ် 50×50×120 စင်တီမီတာ မြေတွင်းတူးပြီး ရေယိုစိမ့်မှုမရှိသော အရွယ်အစားတူ ပလပ်စတစ်အိတ်ထဲတွင် ထည့်ပါ။အပူချိန်0℃ ကျဆင်းသွားသောအခါ Cistanche deserticola ကို အိတ်ထဲတွင်ထည့်ကာ ဆားရည်အတွက် ဆားရည်အတွက် ဆားရည်အတွက် 40% ဆားရည်ကို ပြင်ဆင်ရန် ဒေသထုတ်မွမ်းမံထားသော မြေဆီလွှာဆားကို အသုံးပြုကာ ထုတ်ယူကာ ဒုတိယနှစ် မတ်လတွင် အခြောက်ခံကာ ဆားဒိုင်းမွန်းဖြစ်လာသည်။
(၃) မြေအောက်ခန်း။အေးခဲနေသောမြေဆီလွှာ၏ အရေးကြီးသောမျဉ်းအောက် တွင်းတူးပြီး အေးသောရာသီဥတုတွင် လတ်ဆတ်သော Cistanche deserticola ကိုမြှုပ်ပြီး ဒုတိယနှစ်တွင် အခြောက်ခံပါ။
ယခင်- Ding Xiang Pi စက်ရုံမှ ထောက်ပံ့သော သဘာဝဆေးဖက်ဝင်အပင်များ လေးညှင်းပွင့် အခေါက်
နောက်တစ်ခု: Che Qian Zi Seed of Asiatic Plantain တရုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ လက်ကား
Mu Dan Pi သည် အရည်အသွေးမြင့် Peony Root အခေါက် လက်ကားရောင်းချသည်။
mu hu mu ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ Shallot wood Aralia ch...
Wu Gong သည် တရုတ်တိရိစ္ဆာန်ဆေးများ အရွယ်အစားကြီးသည်..။
Chuan Xin Lian တင်သွင်းသူ သဘာဝဆေးဖက်ဝင်အပင်များ A...
Yun Mu Xiang 100% သဘာဝဆေးဖက်ဝင်အပင်များ အခြောက်လှန်း...
Zhi Nan Xing တရုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ ပြုပြင်ထားသော Arisaema...